Abalungisi Abalishumi Nambili Abamnyama Bomnyama ngo-2020, Ngokuya ngeDerms - Ubuhle
Abalungisi Abahle Bendawo Emnyama, Ngokusho Kwadermatologists
Akudingeki ulinde unomphela amabala amnyama ukuthi aphele.
Kucishe kubi njenge-zit enkulu? Indawo emnyama evame ukulandela. Yilapho izilungisi ezingcono kakhulu zamabala amnyama zitholakala khona. Inenkani futhi yephuza ukubuna — uma iphela — amabala amnyama ayisikhumbuzo esihlala njalo sokuvuvukala, ukulimala kwelanga (esimweni amabala elanga ), kanye nokuqubuka (sawubona, izibazi zomqubuko).
Isizathu sokuthi ifomu lamabala amnyama kungenxa yokuthi izinto ezinjengokulimala kwelanga nokugqashuka kokuqhuma ngokukhiqizwa okujwayelekile kwesikhumba sakho (aka melanin). Ukuvezwa kwe-UV kubangela uketshezi nokwabiwa kabusha kwe-melanin, futhi ukutholakala kwelanga okungapheli kubangela ukwanda kwamaseli akhiqiza umbala, kusho UMichele J. Farber, MD , udokotela wesikhumba eNew York City. Amabala amnyama avela ekuqhumeni (noma i-hyperpigmentation yangemva kokuvuvukala), ngakolunye uhlangothi, kubangelwa ukukhiqizwa ngokweqile kwe-melanin okushiya amamaki amnyama.
Noma ngabe iyini imbangela, umbala wabo ojulile kungaba nzima ukuwufihla ngokufihla wedwa, yingakho ama-derms efunga izithako ezikhanyisa isikhumba ukusiza ukufiphaza amabala amnyama ngokushesha nangaphandle kwethoni yesikhumba. . ama-asidi. Izithako okufanele uzibheke emikhiqizweni engaphezulu kwekhawunta yokwenza ibala ama-retinols , i-alpha hydroxy acids, uvithamini C , i-hydroquinone, ne-kojic acid, kusho uFarber.
Phambili, sicele ochwepheshe ukuthi babelane ngezilungiso ezingcono kakhulu ezimnyama abazincomayo ezigulini zabo, nokuthi kungani bezithanda.
UDkt Brandt Amabala Amnyama Awasekho
Inhlanganisela ephindwe kathathu ye-asidi ye-3% tranexamic acid, i-10% ye-azelaic acid, ne-2% ye-phytic acid yenza lokhu kube ifomula elinamandla ngaphezu kwamanani elikhanyisa futhi lilungise izindawo ezimnyama ezinzima kakhulu. Akugcini lapho, kusiza ukulungisa ubuthuntu nokuthungwa kwesikhumba okungalingani futhi. - UCaroline Robinson, MD , udokotela wesikhumba eChicago
$ 68 UDkt. UBrandt Thenga Manje
IL'Oréal Revitalift Bright Reveal Brightening Moisturizer SPF 30
Ngiyathanda ukuthi lokhu kuthatha indlela enezindlela eziningi zokwelapha izindawo ezimnyama. Ine-vitamin C, eyi-antioxidant ekwazi ukukhanyisa isikhumba; inohlobo lwe-retinol olungathuthukisa inzuzo engena ngamaseli futhi ikhanyise izindawo ezimnyama; ine-glycolic acid, esiza ukugoqa ungqimba oluphezulu lwesikhumba ukwenza ngcono i-pigmentation; futhi ine-SPF enganciphisa umonakalo ongaphezulu. I-multitasker, futhi ikakhulukazi ilungele izindawo zelanga nokuthwebula izithombe. - URachel Nazarian, MD , udokotela wesikhumba eNew York City
$ 26 IL'Oreal Paris Thenga Manje
I-PCA Yesikhumba Semibala Yesikhumba
Lena ifomula ye-hydroquinone engaphezulu kwekhawunta yokukhanyisa umbala. I-Hydroquinone isebenza ngokuvimbela ama-melanocyte akhiqiza i-pigment ekwenzeni i-pigment eningi ngokuvimbela i-enzyme ebizwa nge-tyrosinase. Kusesesithako esisodwa esihle kakhulu sokwelapha umbala, futhi u-2% unamandla kunawo wonke ongaba nawo kumkhiqizo wokunakekelwa kwesikhumba ongabhalisiwe. Isebenza kahle kakhulu kuthoni engalingani kancane ngenxa yokulimala kwelanga, noma i-hyperpigmentation yangemva kokuvuvukala njengamabala amnyama we-post-acne. - U-Annie Chiu, MD , udokotela wesikhumba eRedondo Beach, eCalifornia
$ 64 Isikhumba se-PCA Thenga Manje
Neostrata Foaming Glycolic Geza
Ama-Serum akuyona ukuphela kwendlela yokukhomba izindawo ezimnyama. Lokhu kugeza ubuso kuyisengezo esihle kunqubo yakho futhi. Ine-18% ye-glycolic acid kanye nama-grapefruit ekhishwe, ingasetshenziswa kalula eshaweni, futhi isebenza ngokumangazayo ukukhanyisa isikhumba nokukhanyisa amabala amnyama. Ikuvumela ukuthi wenze cishe ikhasi elincane lamakhemikhali ngaphandle kokuphumula futhi ungasetshenziswa nsuku zonke ngemuva kokwakha ukubekezelelana. Kuhle kumuntu othambekele ezinduneni. - USapna Palep, MD , udokotela wesikhumba eStreet Street Dermatology eNew York City
$ 40 I-Neostrata Thenga Manje
Iserum Yokulungisa I-Differin Dark Spot
Ngingumlandeli omkhulu wamafomula anamandla etafuleni kaDifferin, futhi lo mqondisi webala elimnyama uphakamisa izintandokazi zami. Iqukethe i-2% hydroquinone, okwenza kube yindlela enhle yokusiza ukulwa nombala. Kufanele isetshenziswe kunoma iziphi izindawo ezine-hyperpigmented nsuku zonke, ekuseni noma ebusuku, futhi ingasetshenziswa ngaphansi kwesikrini selanga uma uyifaka emini. - UMelissa Kanchanapoomi Levin, MD , udokotela wesikhumba eNew York City
$ 22 I-Differin Thenga Manje
I-SkinBetter Alto Defense Serum
Uma amabala amnyama nokubomvu kuyinkinga kuwe, ungabheki ngaphezu kwale Serum Yezokuvikela, ethembele emandleni ama-antioxidants, kanye namavithamini C no-E, ukusiza ukunciphisa kokubili. Inikeza ukuvikeleka okungaphezulu kwemvelo, ikhanyise ithoni yesikhumba, futhi isize ukufiphaza amabala amnyama. - Mxolisi Mbethe
$ 150 IsikhumbaNgcono Thenga Manje
I-Glo Skin Beauty Pro 5 Liquid Exfoliant
Leli ikhasi elisha elihlanganayo Ama-AHA nama-PHA ukukhishwa okusebenzayo nokho okunomusa. Ihlanganisa i-mandelic acid, i-lactic acid, i-gluconic acid, i-malic acid, ne-tartaric acid ukuze iphephe kuzo zonke izinhlobo zesikhumba ngaphandle kwengozi ye-hypo- noma i-hyperpigmentation. Isikhumba sakho sizobukeka sikhanya ngemuva kokusebenzisa kanye kuphela. - UDendy Engelman, MD , udokotela wesikhumba eNew York City
$ 56 Ubuhle Besikhumba Somhlaba Wonke Thenga Manje
I-Aveeno Positive Radiant SPF 30 Moisturizer yansuku zonke
Ngiyayithanda le moisturizer ngoba iqukethe kokubili i-soy, evimba ngamandla ukukhiqizwa kwe-melanin ngama-melanocyte esikhumba, ne-SPF, okuyisihluthulelo sokufiphaza noma yiziphi izindawo ezimnyama, noma ngabe kubangelwa i-hyperpigmentation yangemva kokuvuvukala evela enduneni, ukulimala kwesikhumba, noma ngokulimala okungapheli kwelanga. Futhi, kubekezeleleke kahle futhi kusiza ekukhanyiseni ibala lakho jikelele. - UJessica Newspaper, MD , udokotela wesikhumba eLaser & Skin Surgery Center yaseNew York City
$ 19 Aveeno Thenga Manje
phezulu 10 izipho usuku lomama
ILa Roche-Posay Pigmentclar Visible Dark Spot Reducer Serum
Konke kumayelana nezithako nesayensi kimi. Siyazi ukuthi i-ferulic acid ingenye yama-antioxidants amahle kakhulu-yi-O.G.- futhi ama-antioxidants abalulekile ekulweni ne-hyperpigmentation emisebeni ye-UV kanye nemisebe ekhanyayo eluhlaza okwesibhakabhaka esiyithola kusukela ngesikhathi sesikrini. Ngifuna ukuvikelwa ngesinamandla kunabo bonke - asikho isikhathi sezenzo ezibucayi ezingakwenzi ukuphakamisa okunzima - futhi leyo seramu. - UMona Gohara, MD , udokotela wesikhumba eBranford, eConnecticut
$ 49.99 ILa Roche-Posay Thenga Manje
I-No7 Laboratories Indawo Emnyama Yokulungisa I-Booster Serum
Omunye wemikhiqizo engiyithandayo yokwelapha ithoni yesikhumba engalingani yile serum, equkethe i-vitamin C yokusiza ukuqothula i-hyperpigmentation kanye ne-licorice ne-mulberry extract, ama-antioxidants amabili anamandla asekelwe ezitshalweni aqukethe izinto ezilwa nokuvuvukala. Womabili lawa ma-agent athobisayo asiza ukuvimbela i-pigmentation ehlobene ne-oxidative- kanye nemvelo-ngakho-ke i-serum ingcono kakhulu ukwelapha izindawo ezineminyaka yobudala, amabala amnyama, namabala elanga. - UMarnie Nussbaum, MD , udokotela wesikhumba eNew York City
$ 39.99 Amalebhu No7 Thenga Manje
I-Skinceuticals Advanced Pigment Corrector
Le lotion isebenzisa iqembu labashayi abasindayo ukulungisa amabala amnyama anenkani okungathi awapheli: I-Salicyclic acid exfoliates, i-hydroxyphenoxy propionic acid inciphisa ukukhiqizwa kwe-melanin, kanti i-ellagic acid inciphisa ukushintsha kombala. Kuyabiza kodwa kufanele intengo. - UKenneth Howe, MD , udokotela wesikhumba e-Wexler Dermatology eNew York City
$ 92 Ama-Skinceuticals Thenga Manje
I-BeautyRx Ebalulekile nge-8% Yokukhipha iSerum
Ukwelashwa engikuthandayo kwezindawo ezinsundu zomqubuko — noma ukufaka i-hyperpigmentation ngemuva kokuvuvukala — yi-100% tetrahexyldecyl ascorbate esetshenziswa kabili ngosuku ngaphezulu kwe-8% ye-serum glycolic. I-glycolic isiza ukukhulisa inzuzo engenayo yeselula ukuqeda amaseli amaningi ngokweqile nge-brown melanin pigment. - UNeal Schultz, MD , udokotela wesikhumba nomsunguli we I-DermTV
$ 65 $ 52 NobuhleRx Thenga Manje
Isikhumba seCeraVe Sivuselela iVithamini C Serum
UVitamin C yi-antioxidant ebaluleke kakhulu ekukhanyeni nasekukhandeni kwesikhumba. Ngiyayithanda le serum, equkethe u-10% we-vitamin C omsulwa, ama-ceramide, i-hyaluronic acid, ne-vitamin B5 kwifomula e-silky, ne-hydrating. Kusetshenziswa nsuku zonke kuze kube kabili ngosuku, lokhu kungaba isinyathelo esibalulekile ekuthuthukiseni i-hyperpigmentation yesikhumba netoni kusihlwa. - I-CR
$ 24.99 ICerava Thenga Manje
UDkt.Dennis Gross Alpha Beta Amandla Angeziwe Wansuku zonke
Leli cwecwe eliyizinyathelo ezimbili empeleni liqukethe kokubili i-alpha ne-beta hydroxy acids — i-salicylic acid, i-glycolic acid, ne-malic acid — okuyinhlanganisela enkulu yama-asidi okubhekana nezinkinga ezimbalwa, kufaka phakathi i-hyperpigmentation. - D.E.
$ 88 UDkt Dennis Gross Skincare Thenga Manje
Lokhu kusebenza kahle ekwehliseni ukubukeka kwemibuthano emnyama namabala, futhi kulula ukuthola ezitolo zezidakamizwa. Ngiyincoma ezigulini zami ngoba iqhubeka ngokushelela futhi ingasetshenziswa ngaphansi kwesikrini selanga esingeziwe nezimonyo. Kukhona nenguqulo eyakhelwe ngqo labo abanesikhumba esinamafutha. - S.P.
$ 5 Ambi Skincare Thenga Manje
Ukuvikelwa kweScinceuticals Discoloration
Ngomunye wemikhiqizo yokuqala yezentengiselwano emakethe yokuqukatha i-topical tranexamic acid, enye yezinto ezinamandla nezinempumelelo zokufaka imibala emisha etholakalayo. Futhi iqukethe i-kojic acid, i-nonbleach brightener, ne-niacinamide ukulwa nomjikelezo wokuvuvukala oholela ekudalweni kombala okuqhubekayo esikhunjeni sakho. Lo mkhiqizo wenzelwe amabala noma izindawo ezinamabala, hhayi ebusweni bakho bonke, kepha ungasetshenziswa ukusiza ngezinhlobo eziningi ze-hyperpigmentation, ngisho ne-melasma enenkani edumile. - UJK
$ 98 Ama-Skinceuticals Thenga Manje
I-Skinfix Ilungile + Umqondisi Wendawo Emnyama
Lokhu kusebenzisa ama-AHAs, uvithamini C, nama-lipids ukulungisa, kukhanye, futhi kusekele umgoqo wesikhumba sakho. Ibhonasi: Ibuye ibe ne-vegan, engenasihluku, futhi engenayo i-gluten, futhi iza ngokufakwa kabusha. - D.E.
$ 60 I-Skinfix Thenga Manje
zingaki izinkathi zohlobo lwe-anatomy yempunga lapho
indlela yokukhulisa izinwele ezinde
amafreyimu ombhede ahlala phansi